Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Manambara ny fifidianana talen'ny talen'ny Air Canada
Ireo voatendry rehetra dia efa talen'ny Air Canada ary ny talen'ny tsirairay dia nofidian'ny maro an'isa tamin'ny vato napetraky ny tompon-tany nanatrika tamin'ny Internet na natolotry ny mpisolo toerana tamin'ny fivoriana.
Ny fivoriana isan-taona ataon'ny mpisera Air Canada dia natao ny talata 29 jona 2021.
Ireo voafidy rehetra voatanisa ao amin'ny boriboriny proxy fitantanana dia voafidy ho talen'ny Air Canada.
Ny valim-pifidianana farany momba ny raharaha rehetra nifidy tamin'ny fivoriana dia hapetraka ao amin'ny SEDAR.
Air Madagascar dia nanambara androany fa ireo voatendry rehetra voatanisa ao amin'ny boriboriny proxy fitantanana tamin'ny 6 Mey 2021 dia voafidy ho talen'ny Air Canada tamin'ny fivorian'ny Fivondronan'ny tompon-tany izay natao ny talata 29 jona 2021.
Ireo voatendry rehetra dia efa talen'ny Air Madagascar ary ny talen'ny tsirairay dia nofidian'ny maro an'isa tamin'ny vato napetraky ny tompon-trano tonga an-tserasera na natolotry ny mpisolo toerana tamin'ny fivoriana. Ny valin'ny latsa-bato dia aseho etsy ambany.